Kolombia, nisara-bazana ary miatrika fiovana lalina amin’ny fifidianana filoham-pirenena hoavy · Global Voices teny Malagasy
Nahoana no nizarazara ny firenena?
Voadika ny 17 Jona 2022 5:51 GMT
Sary avy amin'i Leon Hernandez/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Hifidy ny filohany sy ny filoha lefiny vaovao i Kolombia amin'ny fifidianana amin'ny alahady 19 jona izao, ary tsy tahaka ny tamin'ny taona maro teo aloha, tsy mbola nisy toy izany ny fisaraham-bazana ara-politika ary misy ny fahafaha-mihevitra fa handresy ireo kandidà avy amin'ny elatra havia, izay tsy mbola teo amin'ny fitondrana hatramin'izay.
Nampiseho ny voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tamin'ny 29 mey fa tsy nisy kandidà nahazo ny 50 isan-jato miampy vato iray mba handresena avy hatrany. Vokatr'izany, hisy ny fihodinana faharoa hatao eo amin'ny kandidà ho filoham-pirenena Gustavo Petro sy ny mpiara-dia aminy Francia Márquez — izay nahazo ny 40,32 isanjaton'ny vato — sy ny “tsy nampoizina” (outsider) Rodolfo Hernández sy Marelen Castillo — nahazo 28,15 isanjato. Araka ny filazan'ireo mpandinika avy amin'ny fampahalalam-baovao tsy miankina Silla Vacía, ny rafitra ara-politika — soloin'ny Uribismo, hetsika ara-politika mpanao ronono an-tavy sy neoliberaly tarihin'ny filoha teo aloha Álvaro Uribe Vélez, tena — no tena resy indrindra tamin'ny fifidianana, ka namela ny kianja hidanadana “hiadyian'ireo samy mpandrendrim-bahoaka.”
Ireto avy ireo kandidà ao amin'ny “Historic Pact (Dina Manantantara)”: Petro, mpikambana taloha tao amin'ny vondrona mpiady anaty akata an-tanàndehibe Movimiento 19 de abril (M19), loholona sady ben'ny tanànan'i Bogotá teo aloha, ary indrindra indrindra, ny kandidany ho filoha lefitra Márquez, mpikatroka ara-tontolo iainana sady mpisolovava teratany Afrikanina, izay mpiasa an-trano taloha ihany koa. Sambany teo amin'ny tantaran'i Kolombia, mety ho tonga eo amin'ny fitondrana ny fiaraha-mitantana malaza avy amin'ny elatra havia ary handrafitra endrika fiarahamiasa ara-jeopolitika (vaovao) ao amin'ny faritra.
“Tsy mbola notarihin'ny revolisionera toa an'i Meksika na Bolivia i Kolombia, na tamin'ny hetsi-bahoaka toy ny Peronisma tany Arzantina, na avy amin'ny sosialista toa an'i Salvador Allende any Shily,” hoy ny BBC. « Novonoina ireo mpanao politika reformista elatra havia izay saika tonga teo amin’ny fitondrana.”
Avy amin'ny vondrona “Ligas Gobernantes Anticorrupción (Ligy Mifehy ny Ady amin'ny Kolikoly),” sady matretre (multimillionaire) ilay kandidà ho filoham-pirenena antsoina hoe Hernández. Na dia teo aza ireo fiampangana kolikoly nahatra taminy, nampifantohany tamin'ny sehatra miady amin'ny kolikoly sy ny fanakianana ireo mpanao politika nentim-paharazana ny fampielezan-keviny. Niteraka resabe ihany koa izy, tsy noho ireo mpanohana marobe an'i Uribe nanohana azy – na dia milaza ho mahaleotena aza izy — fa noho ny fahitan'ny maro azy ho dindon'ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump. Afro-Kolombiana ihany koa ny kandidà ho filoha lefiny Castillo, izay midika fa hahita ny filoha lefiny Afro-Kolombiana voalohany hianiana amin'ny 7 aogositra ny firenena, na iza handresy na iza amin'ny fihodinana faharoa.
Araka ny filazan'ny famoaham-baovao El Espectador, ny zava-nitranga tao Kolombia dia “maneho tranga ara-politika izay nanozongozona firenena maro tao amin'ny kaontinanta”, ahitana ireo mpandrendri-bahoaka avy amin'ny elatra havanana toy ny an'i Donald Trump any Etazonia, Jair Bolsonaro any Brezila, Nayib Bukele any El Salvador, na ireo mpandredri-bahoaka elatra ankavia toa an'i Pedro Castillo ao Però.
Niteraka tsy fahatokisana ireo fifidianana ireo satria tsy nahavita nampiditra mpanara-maso iraisampirenena ny Vaomieram-pirenena misahana ny Fifidianana , ka noho izany dia natao tamin'ny alalan'ny fanaraha-maso rindrambaiko mahazatra eo amin'ny sehatra nasionaly ny fifidianana. Niteraka fanahiana teo amin’ny mpifidy izany ny amin’ny mety hisian'ny hosoka amin’ny fifidianana ataon’ny ankolafy samihafa.
Nahoana no misara-bazana ny firenena?
Ho an'ny maro, nanomboka tamin'ny taona 1948 ny fisaraham-bazana mahery vaika rehefa nisy namono ilay mpanao politika liam-pandrosoana Jorge Eliecer Gaitán, nitarika ho amin'ny fananganana vondrona mpiady anaty akata mahery vaika sy ireo vondrona miady amin'ny mpiady anaty akata. Mbola mitohy hatramin’izao ny herisetra, ifanaovan'ny milisy mpifehy ny zava-mahadomelina sy ireo mpiady anaty akata sady mpikirakira sy mpanondrana zava-mahadomelina, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra. Vao haingana ohatra, dia nanao fitokonana mitam-piadiana ny vondrona milisy Clan del Golfo (Tarika Helodrano) izay nisy fiantraikany tamin'ny kaominina ambanivohitra miisa 178 mba hamaly faty amin'ny fandefasana ny mpitarika ambony indrindra ao aminy, Dairo Antonio Úsuga David, antsoina hoe Otoniel, hotsaraina any Etazonia.
Avy amin'ny ady an-trano tao Kolombia noho izany ity fisaraham-bazana ity, izay nahafatesana olona an'hetsiny sy namindrana toerana olona an-tapitrisany maro, ary mbola mitohy izany na dia eo aza ny fifanarahana fandriampahalemana manan-tantara teo amin'ny iray amin'ireo vondrona mpiady anaty akata tamin'ny taona 2016. Maro ireo olona mitsikera ny fomba fitantanan'ny filoha ankehitriny Iván Duque ny fanatanterahana ny fandriampahalemana eo amin'ny governemanta sy ny FARC-EP, izay nampizotra kokoa ny ady ho any amin'ny fiafarany, saingy tsy nampitsahatra ny herisetra.
Tamin'ny fakan-kevitra tamin'ny volana Febroary 2022, tsy nankasitraka ny governemantan'i Duque ny 73 isanjaton'ny mponina. Tsy faly manoloana ireo olana lehibe toy ny kolikoly, ny filaminam-bahoaka, ny toe-karena, ny asa, ny fahasalamana, ny tontolo iainana ary ny fanabeazana ny ankamaroan'ny olona. Tamin'ny 4 Jona 2022, voaheloka tsy hahazo hivoaka ny trano i Duque noho ny tsy fanajany ny didim-pitsarana momba ny fiarovana ny valan-javaboary.
Etsy ankilany, nanararaotra ny tsy fahafaham-po ankapobeny nateraky ny vondrona mitam-piadiana anaty akata ny hery elatra havanana izay ka nandrangaranga hafatra manohitra ny hevitra avy amin'ny elatra havia sy ny Tafika Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia (FARC), ary nanao izany indrindra tamin'ny haino aman-jery mahazatra, izay nihamafy hatramin'ny nandraisan'ny governemanta Uribe ny fitondrana tamin'ny taona 2002. Ankehitriny, matahotra ny hisian'ny governemanta elatra havia ny ampahany be amin'ny vahoaka satria nolazaina tamin'izy ireo fa, raha mandresy i Gustavo Petro, dia “hanjary Kiobà na Venezoelà” i Kolombia. Matahotra izy ireo fa mety ho mpandrendrim-bahoaka izay mety hitarika an'i Kolombia ho bankirompitra i Petro na ho lasa tsirefesimandidy. Maherin'ny 90 isanjaton'ny Kolombiana no tsy mankasitraka ny filoha Venezoeliana Nicolás Maduro. Venezoeliana tombanana ho 1.7 tapirisa no nipetraka tany Kolombia tamin'ny marsa 2021, maro no nandositra ny krizy maha-olona miha-lalina.
Etsy andaniny, nilaza ireo Kolombiana mpifidy hafa fa nifoha izy ireo rehefa nahafantatra ny marina momba ny “zava-miabo hosoka” — ny famonoana olom-pirenena an'arivony, indrindra fa nataon'ireo mpikambana ao amin'ny tafika Kolombiana, mba hanehoana azy ireo ho fandresena manoloana ny mpiady anaty akata sy ireo mpanao trafika rongony — sady vokatry ny fitokonana nasionaly tamin'ny taona 2021 nateraky ny fanambaràna hanavaozana ny hetra. Nandritra ny fitokonana, tanora miisa 80 no maty ary maro hafa no naratra; notazonin'ireo fikambanana samihafa ho tompon'andraikitra ny tafi-panjakana noho ny fampiasana hery tsy ara-dalàna sy tsy mifandanja. Toherin'ireo mpitokona ihany koa ny fandripahana sy ny famonoana ireo mpitarika ara-tsosialy maro (izay mbola misy maty hatrany), ny kolikoly, ary ny fisondrotry ny vidim-piainana, ary notinaky ny fiarovana ny fahamendrehana, ny fiainana, ny hitsiny ary ny zon'olombelona. Maro tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no tsy nankatoa ny governemantan'i Duque, izay heverin'izy ireo fa nametraka rafi-panjakana ho azy manokana.
Hifidy ny hoaviny ny Kolombiana mizarazara amin'ny 19 Jona izao. Na iza na iza mandresy dia maniry fiovana ny Kolombiana.
Fitantarana manokana: Ady amin'ny fitomboan'ny hantsana any Kolombia